Naorina tamin'ny 2015, Ningbo Oicozy izao lasa ho iray manokana mpamatsy sy ny mpanondrana izay indrindra ny hiatrika ny famolavolana, tsena ho an'ny zaza sy ny famokarana fiarovana entana, ohatra varavarana stopper, fehizoro mpiaro, ny fiarovana hidin-trano, sy ny fiarovana vavahady sy ny sisa.
Isika hita ao Ningbo, Shina amin'ny mety fitaterana fidirana sy ny vokatra rehetra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena toetra izay tena fantatra amin'ny tsena isan-karazany manerana izao tontolo izao. Mifanojo amin'ny faritra ny atrik'asa 2000 metatra toradroa, isika izao dia manana ny 80 mpiasa, isan-taona varotra endrika izay mihoatra USD3, ary amin'izao fotoana izao 000.000 fanondranana 90% ny famokarana eran-tany.
Ny tsara-ampy fitaovana tsara kalitao trano sy ny fanaraha-maso manerana ny famokarana rehetra dingana manampy antsika mba hiantoka tanteraka mpanjifa fahafaham-po. Ankoatra efa nandray ISO9001 sy BSCI fanaraha-maso ho an'ny mpanamboatra fanampiny.